‘ब्रेकअप’ दिएको भन्दै प्रेमीकाले काटिन् प्रेमीको लिङ्ग ...
काठमाडौंस्थित बौद्धमा प्रेम सम्बन्ध सफल नहुने देखेपछि १९ वर्षीया युवतीले प्रेमीको लिङ्ग नै काटिदिएकी छन् । मकवानपुर घर भइ बौद्ध बस्दै आएका २१ वर्षीय सुनुवार थरका व्यक्ति सख्त घाइते भएका छन् । ती व्यक्ति काठमाडौंको एक होटलमा कर्मचारी हुन् । बौद्धका ड ...
‘टेष्ट राइड’ गर्ने बाहानामा बाईक चोरी ...
काठमाडौँमा टेष्ट राइड गर्दा मोटरसाइकल नै गायब भएको छ । मोटरसाइकल धनी मिलन सुब्बाले छ लाख ५० हजार पर्ने एउटा मोटरसाइकल बिक्रीमा छ भनेर हाम्रो बजार डटकममा राखे । त्यो देखेपछि काभ्रेका अञ्जन बराल खोज्दैखोज्दै सुकेधारा पुगे । बरालले किन्नु अगाडि ‘ ...
एकै दिन १७ जनासँग सहवास ! ...
काठमाडौंँ उपत्यकामा सञ्चालित रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत एक महिला श्रमिकले प्रतिदिन १७ जना ग्राहकसँग शारीरिक सम्वन्ध राख्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर–३२ कोटेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित होटल, गेष्टहाउस, डान्स, दोहोरी ...
रुखमा अड्किएर निस्कन सकेनन्ः दुई वर्षपछि भेटियो कंकाल ...
मस्को पुलिसले हालै शहरभन्दा करिब १२८ किलोमिटर टाढाको जंगलमा रुखमा बाँधिएको एक नरकंकाल भेटेको छ । अनुसन्धानमा पत्ता लागेअनुसार यो कंकाल इवान क्लूशारेवको हो जसलाई अन्तिम पटक मस्कोमा नै दुई वर्ष अघि देखिएको थियो । रुसी पुलिसका अनुसार इवान हाइकिङ र &lsq ...
रहस्यमयी गाउँः जहाँ एउटा रुखले बनाइदियो सबैलाई अन्धो ...
भारतको एउटा गाउँ ‘टिल्टेपक’ का सबै मानिसहरु अन्धो छन् । उक्त गाउँमा बस्दै आएका जोपोटेक जनजातीका मानिसहरु वास्तबमा जन्मदेखि नै अन्धो भने हुँदैनन् । तर, उमेर बढेसँगै विस्तारै उनीहरुले आखाँको ज्योती गुमेको थाहा पाउँछन् । यो के कारणले भएको छ ...
३६ गोल बचाएपछि कप्तानले दिएर एके-४७ उपहार ...
चाहे फुटबल होस् वा क्रिकेट उत्कृष्ट खेलाडीलाई खेल सकिएसँगै प्लेयर अफ द म्याच घोषणा गरी पुरस्कार दिइन्छ । पुरस्कारको रुपमा कप, मेडल वा नगद दिएको देखिन्छ । तर रुसमा एकजना खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका कारण नगद वा पदक होइन एके-४७ बन्दुक उपहार पाएका ...
कसरी छानियो ट्राफिक बत्तीको रङ ? यस्तो छ इतिहास ...
विश्वमा सबैभन्दा पहिले सन् १८६८ को डिसेम्बर १० तारेखमा बेलायतको लण्डनस्थित संसदभवन बाहिरको सडकमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिएको थियो । रेलवेका अभियन्ता जेके नाइटले उक्त ट्राफिक लाइट जडान गरेका थिए । रातमा देखियोस् भन्नका लागि यसमा ग्यासको प्रयोग गरिएको थ ...
आत्महत्या गर्न प्रयोग गरेको पेस्तोल १ लाख ८१ हजार डलरमा बिक्री ...
डच चित्रकार भिनसेन्ट वान गफले आत्महत्या गर्न प्रयोग गरेको पेस्तोलको लिलामी गरिएको छ । मंगलबार पेरिसमा उक्त हतियार १,८१,००० डलरमा लिलामी गरिएको हो । लिलामीको लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रमका आयोजकले हतियार लिने व्यक्तिको पहिचान भने गोप्य राखेको छ । आयो ...
विमानस्थलमा यात्रुको लगेजमा जब मिसाइल लञ्चर भेटियो ...
अमेरिकाको बाल्टिमोरस्थित विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले यात्रुको लगेज चेकजाँच गर्ने क्रममा मिसाइल लञ्चर भेटेका छन् । विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेबारी पाएको ‘ट्रान्सपोर्टेसन सेकुरिटी एडमिनिस्ट्रसन(टीएसए)’का अधिकारीले उक्त शक्तिशाली सैन्य उपकर ...
एटीएम मेशिन चोर्न क्रेनसहित आए चोर ! ...
एटीएम मेशिनबाट रकम चोरी भएको घटना बारम्बार प्रकाशमा आउने गरेका छन् तर चोरले एटीएम मेशिन नै चोरी गरेको घटना भने अनौठो नै हो । उत्तरी आयरल्याण्डमा चोरको एक गिरोहले एटीएम मेशिन नै चोरेको छ । मास्क लगाएर आएका चारजनाको समूहले एटीएम मेशिन चोरेका हुन् । स ...